Ngwọta akpaaka kachasị elu nke 20 | Martech Zone
Marketing akpaaka na-aghọ mkparịta ụka anyị na ndị ahịa na-eme kwa izu. Taa anyị tụlere Hubspot (nke onye ahịa ji), Na-aga n'ihu (nke anyị na-emejuputa atumatu maka ndị ahịa anyị abụọ) ma gosipụta ya na onye ahịa ya na m na-agwa ndị otu izu gara aga maka ọganiihu ha.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ dịghị otu ihe ahịa akpaaka na-ere ahịa nke ka nke ọzọ mma. Offọdụ n'ime ha nwere ụfọdụ atụmatụ dị ịtụnanya, mana ị kwesịrị ị paya ntị nke ọma etu usoro gị na ngwa ndị ọzọ nwere ike isi rụọ ọrụ na ikpo okwu na-ere ahịa kama ịnwa imejuputa otu ma gbalịa ịgbanwe ụlọ ọrụ gị dum iji kwado ya.
N'ime ogologo nhọrọ nke nhọrọ ngwanrọ nke nwere ike inyere azụmahịa gị aka, Ahịa akpaaka dị nso n'elu. Ọ ghọrọ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa maka ndị ọkachamara n'ahịa. Ahịa akpaaka na-enyere ụlọ ọrụ aka iduga ndị ahịa ma bulie ahịa sitere na ndị ahịa dị ugbu a.
Capterra bụ nnukwu akụ maka nyocha ihe ngwanrọ. Lelee ha Akwụkwọ ahịa akpaaka na ahịa maka ndepụta zuru ezu nke ndị na-enye ahịa Ahịa Ahịa.
Tags: Na-aga n'ihuomeeokpuokpokorokwetanri na mmekọrịtaROI
Dee 9, 2011 na 9: 35 AM
Ejirila m Marketo ma chee na ha nwere ngwaahịa siri ike. Echere m na ịzụ ahịa akpaaka na-eme ka ndị otu dị iche iche chee echiche miri emi banyere ahụmịhe ha na-enye atụmanya ha na ndu ha, ọtụtụ uru ya na-enwe ike ịlele ihe niile ma nwalee ya n'enweghị nsogbu.
Debbie Qaqish na Pedowitz Group na-ekwu maka “Revenue Marketing” n’akwụsịghị akwụsị, ọ bụ n’ezie usoro ndị a na-enye ndị na-ere ahịa olu ike dịka onye isi ahịa ’n’ihi na ọ na-eme ka data na-aga n’ihu.
Anyị ga-ekwu n'oge adịghị anya. Ọ ga-amasị m ịmatakwu echiche gị banyere regrading Act-On.
Dee 9, 2011 na 10: 53 AM
Anyị nwere ezigbo ahụmịhe na @actonsoftware: twitter na ndị ọrụ ha… ezigbo ezigbo ndị nọ ebe ahụ na-enye aka. Echere m na mpempe akwụkwọ kachasị ike nke ngwa ha bụ na ị nwere ike ịdenye aha GotoWebinar ma tinye ya na akpaghị aka na CRM gị… dị mma n'ezie maka ụlọ ọrụ ngwanrọ na-akwaga demos na webinars kwa ụbọchị.
Dec 9, 2011 na 2:32 PM
Nke a bụ ụzọ nduhie. Ọ na-agwakọta apụl na oroma na "kachasị ewu ewu" apụtaghị ihe ọ bụla!
Dec 9, 2011 na 2:36 PM
Anaghị m ekwenye, Scott. Anọ m na-achọ ezigbo ndepụta nke nyiwe akpaaka nke oge ụfọdụ, n'agbanyeghị, ma chee na ndepụta a adịchaghị njọ. Ka m na-ekwu n'elu, mmadụ ga-agbakwunye usoro ụlọ ọrụ ha n'ụzọ ziri ezi, n'agbanyeghị!
Dec 9, 2011 na 5:08 PM
Enweghị nchekasị, enwetara m ihe ị na-achọ imezu. Ọ bụrụhaala na ọgba dị na ya, ọ dị mma. Nwee ezigbo izu ụka!